Tag: logo mavara | Martech Zone
Tag: logo mavara
Chishanu, June 29, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Ruvara runogara iri nyaya inonakidza uye anga ari mamwe eanonyanya kufarirwa infographics isu takagovana pane blog. Ruvara zvaunofarira nehunhu, logo mavara pawebhu, uye kuti kana kwete kana mavara anokanganisa kutengesa anga ari infographics isu atomhanya. Iyi infographic kubva kuMarketo uye Column Shanu inopa maonero akasiyana… ndeapi mavara anoti nezve yako marangi. Marketo: Mhando dzakakurumbira pasi rese dzinotsanangurwa nemavara avo. Funga nezveMcDonald's